Professional Hot Selling Fire Resistant Safe Box QG-60 1 Hour Fire Rating ထုတ်လုပ်သူ
အိမ် > အမှုတွဲများ
Benin Client အတွက် စိတ်ကြိုက်မီးခံနိုင်သော လုံခြုံစိတ်ချရမှုသေတ္တာ
မလေးရှားဖောက်သည်အတွက် နာရီ 20 နှင့် လက်ဝတ်ရတနာအံဆွဲ4ခုပါသည့် စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားရှိ ဇိမ်ခံလက်ပတ်နာရီ Winder သည် ဘေးကင်းပါသည်။
အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ကျွမ်းကျင်သော fireproof ဖိုင်တွဲ ကက်ဘိနက် ထုတ်လုပ်သူ စက်ရုံကို စိတ်တိုင်းကျပါ။
အရည်အသွေးမြင့် နာရီ Winder Safe Box 120 Min Fire Rating-Foshan Weierxin Safe Factor
အရောင်းရဆုံး Fire Resistant Safe Box QG-60 1 နာရီ မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်
2004 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Foshan Weierxin Safe Co., Ltd သည် Custom Safe Box ၏ ထင်ရှားသော ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည် ရေစိုခံမှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ လှပသောဒီဇိုင်း၊ ကောင်းမွန်သောအချောထည်နှင့် ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်းကြောင့် ဈေးကွက်တွင် အလွန်ချီးကျူးခံရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် စက်မှုလုပ်ငန်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူများထံမှရရှိသော အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကုန်ကြမ်းကိုအသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ထုတ်ကုန်များသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုမိုကြာရှည်ပြီး အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို သေချာစေရန်အတွက် အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများစွာကို ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဖောက်သည်များသည် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဤထုတ်ကုန်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2004 ခုနှစ်မှစတင်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၊ Foshan City၊ Guangdong ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိပြီး Foshan Weierxin Safe Co., Ltd သည် ဧရိယာ 23,000 စတုရန်းမီတာကျော်ကို လွှမ်းခြုံထားပြီး ဝန်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံသော ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ၎င်းသည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အရောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပါရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Weierxin Safe သည် မီးခံနိုင်သော မီးခံသေတ္တာများ၊ အိမ်ဘေးကင်းများ၊ ရုံးသုံး မီးခံသေတ္တာများ၊ ဟိုတယ် ဘေးကင်းများ၊ နာရီအကာအရံများ လုံခြုံသော၊ သံမဏိ ဗီရို၊ သေနတ်ဘေးကင်းများ၊ ဖိုင်များ လုံခြုံသော၊ ငွေသားသေတ္တာများ၊ ဗောက်တံခါး နှင့် အခြား မှန်လုံလုံခြုံရေး ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CE၊ ROHS၊ FCC နှင့် fireproof လက်မှတ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ 500,000 ကျော်ဖြင့် အိမ်၊ ရုံး၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဟိုတယ်စသည်ဖြင့် နယ်ပယ်များစွာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြပါသည်။ Weierxin Safe သည် လူများနေထိုင်၊ အလုပ်နှင့် ကစားသည့်နေရာများတွင် စိတ်၏ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကောင်းဆုံးအတန်းအစားတန်ဖိုး၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကတိပေးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်များတွင် အယုံကြည်ရဆုံး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသော ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ Weierxin Safe တွင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် 1000 ကျော်ရှိပြီး သစ္စာရှိဖောက်သည်5သန်းကျော်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို တင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံခြား အမှတ်တံဆိပ် တံဆိပ်များစွာကို OEM ပေးသွင်းသူ ဖြစ်ပါသည်။ 2004 ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထုတ်ကုန်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မြှင့်တင်ထားပြီး လိုက်နာရန် သစ္စာရှိ သုံးစွဲသူများလည်း ရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်သော OEM ဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကို တည်ဆောက်ထားသည်။& OMD အတွေ့အကြုံ။OEM/ODM မှာယူမှုများကို ကြိုဆိုပါသည်။ R မှာ အားသာချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။&ဃ၊ အထူးသဖြင့် မီးခံသေတ္တာများတွင် သုံးစွဲသူဘေးကင်းရေး တပ်ဆင်မှု။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံဖြင့်၊ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့် စီးပွားဖြစ်ပံ့ပိုးမှုတွင် ပေးအပ်ထားသော အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ် ရှုမြင်ခံရပါသည်။
ဤဖောက်သည်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား Alibaba မှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူမသည် အစိုးရအတွက် မီးခံသေတ္တာကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။သူမသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုနှင့် မီးခံလုံခြုံရေးသေတ္တာ၏ အကြံဉာဏ်များကို ပေးပို့ခဲ့သည်။ rotary platform ပါရှိသော မီးခံသေတ္တာကြီး ၁၀ လုံးနှင့် စံအရွယ်အစား မီးခံနိုင်သော ဘေးကင်းရေး သေတ္တာ ၂၅ လုံးတို့ကို လိုချင်ကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်မှုအပြီးတွင် ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်အရ ပထမဦးစွာ ပုံများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အပ်ငွေလက်ခံရရှိပြီးနောက် အတည်ပြုချက်အတွက် နမူနာတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ပထမဦးစွာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ နမူနာကို အတည်ပြုပြီးနောက်၊ အစုလိုက် ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်။ဖောက်သည်သည် လုံခြုံရေးသေတ္တာကို လက်ခံရရှိသောအခါ ကျေနပ်သည်။ သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်ပရောဂျက်အတွက် သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို အမိန့်အသစ်ပေးလိမ့်မယ်။Foshan Weierxin Safe သည် ဖောက်သည်များအတွက် ပိုမိုအရည်အသွေးမြင့်သော ဘေးကင်းရေးသေတ္တာကို ထုတ်လုပ်ရန် ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါမည်။
မလေးရှားဖောက်သည်သည် ဇိမ်ခံနာရီအကာအရံများကို လုံခြုံစွာ လိုချင်သည်။ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီးနောက်၊ အသေးစိတ်အချက်များအားလုံးကို အတည်ပြုခဲ့သည်- နာရီ 20၊ အံဆွဲ ၄ ခု၊ အတွင်းအနက်ရောင်နှင့် အတွင်းတွင် လိမ္မော်ရောင်။သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။Foshan Weierxin Safe သည် ဖောက်သည်များအတွက် ပိုမိုအရည်အသွေးမြင့်သော ဘေးကင်းရေးသေတ္တာကို ထုတ်လုပ်ရန် ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါမည်။
Weierxin Safe Best Quality Professional သည် fireproof filing cabinet ထုတ်လုပ်သူ Factory ကို စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်အောင် ၊ တိကျသော ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စံသတ်မှတ်ချက် စည်းမျဉ်းများကို အမြဲတမ်း လိုက်နာခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပြီး သင့်အတွက် အမြင့်ဆုံး အကျိုးကျေးဇူးများ သယ်ဆောင်လာပါသည်။
၎င်းသည် စိတ်ကြိုက်နာရီအကာအရံဘေးကင်းသောသေတ္တာဖြစ်သည်။၎င်းသည်2နာရီ မီးခံနိုင်သော နာရီ winder လုံခြုံသည်။၎င်းတွင် ရဟတ် ၁၂ ခုပါရှိသည်။ နာရီအကွေ့အကောက်ကို လှည့်ထားသည်။ တစ်ဖက်တွင် ရဟတ် ၆ လုံးရှိပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် ဟန်ချက်ညီသော ရဟတ် ၆ လုံးရှိသည်။ဒီမှာ လက်ဝတ်ရတနာ အံဆွဲ ၂ ခု။မင်းရဲ့ အဖိုးတန် လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ထားနိုင်ပါတယ်။
Weierxin သော့ကိုတပ်ဆင်ခြင်း စိတ်ကြိုက် Fireproof Safe
Foshan Weierxin Safe သည် fireproof safe box ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
လက်လီလက်ကား Amazon Ebay အရောင်းရဆုံး Mini Safe Box ကို ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းဖြင့် LCD ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Weierxin Safe
အရွယ်အစား: H200*W310*D200mmလော့ခ်- LCD ဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်N.W.: 5.5KGG.W.: 6.0KG
အရည်အသွေးမြင့် မီးခံသေတ္တာ OEM လက်ကား - Foshan Weierxin Safe Co., Ltd
အရွယ်အစား: စိတ်ကြိုက်မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-2နာရီလော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ်လော့ခ်/ Manul လော့ခ်